Umzi mveliso wePumphead -iChina Pumphead abavelisi, abaXhasi
Imodeli: YZ35 uthotho lweempawu ● Izinto zayo yiPSU enokusebenza okuzinzileyo kunye nokuchasana nobushushu obuphezulu (150 ° C) ● I-asidi enganyangekiyo, isoda, kodwa hayi isinyibilikisi se-organic ● Ngaphakathi iinxalenye zesinyithi zenziwe ngentsimbi engenasici engama-304. ukunciphisa ukusila kwetyhubhu, kwaye kwandisa ubomi beetyhubhu Iiparamitha zobuGcisa Imodeli efumanekayo kwimibhobho yokuhamba kokuhamba okuphezulu （ml / min, Uluhlu lwezantya （rpm） Izinto zokubopha izinto zokubopha izinto Roller NO. bunzima ...
Ukunyanzelwa okuphantsi kwe-DMD15
Ireyithi yokuhamba okuphezulu: 2070ml / min 1 ukubetha okuphantsi, ukugada okuphezulu kwe-2, ngokukodwa kwi-high-precision dispensing kunye ne-flow flow flow rate 3.PPS izindlu, zinokuma i-asidi, i-alkali, kunye ne-orangic solventic Double-compensation pressing block ukunciphisa Ukutshintshwa ngempumelelo nangokuchanekileyo nangokuchanekileyo kuyaphuculwa Itheyibhile yoBugcisa imodeli yokuqengqeleka kwenani lezinto ezibonakalayo isantya sezithuthi isantya esifanelekileyo setyhubhu yokuhamba kwezinga lokuhamba ml / min Impazamo ephindiweyo Isisindo (kg) DMD15-2A 304 Stainless st ...
INtloko yePompo yoMthwalo oKhawulezayo weKZ35
Ukuhamba kwenqanaba lokuhamba: I-11000ml / min Yenziwe ngentsimbi engenasici isebenzisa ngokupheleleyo icandelo lokubonelela ngeendlela ezimbini zeTubing Retainer: Clamper okanye efanelekileyo. Intshayelelo Intloko yempompo ye-KZ35 yenziwa ngentsimbi engama-304 ngaphandle kwentsimbi. Yenzelwe ngokukodwa kwaye yaveliswa kwishishini lokuxuba kunye nokutya ngokweendlela ze-GMP. Ikwanazo neempawu zokuhamba okukhulu, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo, ukumelana nokubola, ngaxeshanye ngokweemfuno zomsebenzisi, iintloko zempompo zinokufakwa. Umntu ● Wamkela ...
Impompo yeNtloko yeMpompo eKhawulezayo KZ25
Ukuhamba kwenqanaba lokuhamba: I-6000ml / min intshayelelo Xa intloko yempompo ye-KZ25-1A ilungisa i-tubing efanayo ne-YZ25-1A, inokubonelela ngereyithi yokuhamba kabini kune-YZ25-1A Bonelela ngeendlela ezimbini zokugcina i-tubing: i-Clamper okanye efanelekileyo. I-KZ25-1A yamkela iiroller zentsimbi ezingama-304 kunye nokuphosa iPC. Ke oko kubonelela ngokusebenza okubonakalayo Ibhloko yoxinzelelo lwe-PPS ine-Self-lubrication ukunciphisa ukunxiba kweetyhubhu. Ukuqina Good ubungakanani ezinzile. Ukuhambelana kwemichiza okugqwesileyo kunye nokumelana nobushushu. Umntu ● Iikhatriji kunye nesiseko ...
Ixabiso lokuhamba okuphezulu: 248ml / min kwi-150rpm Iimpawu zokuhamba okuphantsi okuphezulu, ezichanekileyo zentloko yokumpompa intloko ukujonga imeko yokusebenza ngokulula kunye nokugqibeleleyo, inokuxhonywa kwipleyiti yodwa okanye kwipaneli esetyenziselwa ikakhulu iMilinganiselo yoFakelo lweModeli Imodeli efanelekileyo yokutyubhisha iMax ml / min Isantya semoto Rpm Izinto zokubopha Izinto zokubhala iinombolo mqengqeleki JY15-1A 13 #, 14 #, 19 #, 16 #, 25 #, 17 # 248 5050 POM PPS 2/4
Ixabiso lokuhamba okuphezulu: 2200ml / min Imodeli: YZ15 / 25 uthotho lokusetyenziswa kweLebhu yoyilo, iintloko zempompo ezinokuphindaphindwa Isimilo ● Izixhobo zayo yiPSU enokusebenza okuzinzileyo kunye nokuchasana kobushushu obuphezulu (150 ° C) ● I-asidi enganyangekiyo, isoda, kodwa inganyibiliki ● Ngaphakathi iinxalenye zentsimbi zenziwe ngentsimbi engenasici engama-304 ● Iiroller ezisebenza ngaphezulu ziye zandiswa ukunciphisa ukusila kwemibhobho, kwaye zanyusa ubomi beetyhubhu zeeparameter zobuGcisa Imodeli efumanekayo kwimibhobho yokuhamba kwamaza Max ml / min） ...
Iintloko zempompo zothotho lwe-DG zenzelwe amaqondo okuhamba okuncinci, ukuhambisa amanzi ngeendlela ezininzi kunye nokubonelela ngokuchaneka okuphezulu. Kulula ukutshintsha kwaye ulungise i-tubing. Isilondo kunye nevili lokulinganisa liphuculwe ukuze libe nokusebenza ngcono. Abasebenzisi banokulungisa kwaye batshintshe i-tubing ngokulula. Umlinganiswa ● Ukuzibandakanya kunokuhlengahlengiswa kancinane ngevili le-ratchet ukuze ilingane neemfuno zodonga lweetyhubhu ezahlukeneyo. ● Iinqwelo ezi-6 zempompo yokuhambisa intloko ngaphezulu kokuhamba kwenqanaba. ● I-10-rollers inciphisa ukubetha kunye nokuhamba kwenqanaba kancinci. ● Isakhono ...
Le mveliso ngoku isetyenziswa ngokubanzi kwintloko yempompo yeklasikhi, iiroller zenziwe ngentsimbi engenanto okanye iPET-TX, istasing senziwe ngePC. Intloko yonke yempompo icacile kwaye iyabonakala. Kulula ukuba umsebenzisi ajonge ukusebenza kwempompo yomntu ● Ukucaca okucacileyo, ukubetheka okuphantsi ● Ukusebenza okuzinzileyo kunye nokuzinzileyo ● Ubungakanani beCompact ● Ukukhupha intloko kwimpompo kwi-drive kuyafuneka xa kulayishwa ishubhu ● Intloko yempompo esemgangathweni Imodeli yeModeli yokuFumaneka ...